Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » COVID-19 furlough na-akwụsị n'oge kacha njọ maka njem nlegharị anya UK
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Njedebe ọkụ ọkụ COVID-19 na-abịa n'oge kacha njọ maka ndị njem UK
Njedebe nke ọgbaghara enweghị ike ịbịa n'oge ka njọ n'afọ maka ụlọ ọrụ njem UK.
Agbanyeghị na mgbake ụlọ UK nọ n'ụzọ maka nlọghachi 2022, ụlọ ọrụ ahụ ga -ebu ụzọ buru ụzọ oge oyi siri ike.
Itinye nguzozi ga -ebute isi ọwụwa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ njem - ọkachasị ndị na -atụkwasị obi na njem mba ofesi.
Site na atụmatụ mmeghe nke UK ga -akwụsị n'ọnwa a, a ga -amanye ụlọ ọrụ njem iji belata ego iji lanarị oge oyi. Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na -adọ aka na ntị na ụdịrị ihe a nwere ike ịgụnye ịlaghachi azụ.
Njedebe nke furlough enweghị ike ịbịa na a oge ka njọ n'afọ maka ụlọ ọrụ njem UK. Oge oyi nke siri ike abịarala anyị, na ịbelata ọnụ ahịa ga-adị mkpa maka nlanarị. Ọ bụ ihe nwute, nke a pụtara na ọ ga -abụ na nloghachi nwere ike bụrụ na nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji chekwaa ego.
Ndị nyocha ụlọ ọrụ na -ebu amụma UK njem ime ụlọ ịlaghachi na ọkwa 2019 n'oge 2022, mgbe ọ ga -eru njem nde 123.9. Agbanyeghị, mba Njem njem ọpụpụ ga-ewe ogologo oge, ọ gaghị alaghachi na ọkwa pre-COVID ruo 2024, mgbe ha ga-aga njem nde 84.7.
Ọ bụ ezie na mgbake ụlọ na -aga n'ihu maka nlọghachi 2022, ụlọ ọrụ ahụ ga -ebu ụzọ buru ụzọ gafee oge oyi siri ike. Enweghị ọchịchọ zuru oke, a ga -anọgide na -egbochi ego na ụlọ ọrụ ga -agbasi mgba ike. A ga -enwerịrị ezigbo nguzozi n'etiti nloghachi na ịkpa ike n'ọdịnihu.
Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na -egosikwa ihe egwu dị na idobe nọmba ndị ọrụ na ụlọ ọrụ njem UK, Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ amalite ime ka ndị ọrụ kwụsịlata, ha agaghị enwe ike ịzaghachi nsogbu mberede na -achọ. Itinye nguzozi ga -ebute isi ọwụwa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ njem - ọkachasị ndị na -atụkwasị obi na njem mba ofesi. Ọdịdị na -agbanwe ngwa ngwa nke mmachi njem nwere ike ịhụ mmụba mberede na -achọ ebe ụfọdụ na obere oge. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere obere ego, ọ nwere ike hapụ ego ha chọrọ. N'aka nke ọzọ, ijigide ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike bute ụgwọ na -agbada n'ike.
Ịgbatịpụ atụmatụ ọgbaghara maka ụlọ ọrụ njem nwere ike zụta oge maka ngalaba ahụ ruo mgbe ọchịchọ bidoro sie ike. Agbanyeghị, atụmanya ahụ pere mpe.